मलेसियाका गृहमन्त्रीले अब यो देशका नागरिकहरूलाई मात्र सेक्युरिटी गार्ड भर्ती गर्ने ! - jagritikhabar.com
मलेसियाका गृहमन्त्रीले अब यो देशका नागरिकहरूलाई मात्र सेक्युरिटी गार्ड भर्ती गर्ने !
मलेसियन गृह मन्त्रालयले अब नेपाल बाहेक बंगलादेश, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया देशका नागरिकहरूलाई सुरक्षा गार्ड (सेक्युरिटी गार्ड) को रूपमा काम गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव गरेको छ।
विदेशी सुरक्षा गार्ड भर्नामा नेपाल बाहेक अर्को स्रोत देश थप्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव समयसापेक्ष भएको मलेसियाको सेक्युरिटी इन्डस्ट्री एसोसिएसन (PIKM) ले जनाएको छ ।
PIKM अध्यक्ष दाटुक सेरी रामली युसुफले सुरक्षा उद्योगलाई फाइदा हुने भएकाले संघले प्रस्तावलाई स्वागत गरेको बताए। रमलीले गार्डलाई राष्ट्रको तेस्रो रक्षा पंक्ति मानिने भएकाले सुरक्षा उद्योगमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
“सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा दिइएको छ तर सुरक्षा कम्पनी र त्यसका गार्डहरूले पनि बोलाएमा देशको सुरक्षामा सहयोग गर्न सक्छन्।
“हाम्रा सदस्यहरू सधैं आफ्नो भूमिका खेल्न तयार छन्,” उनले थपे। स्वस्थ सुरक्षा उद्योगले सरकार र देशको लागि थप आम्दानी पनि गर्नेछ, रामलीले भने।
“उद्योगले वार्षिक कारोबारमा अर्बौं रिङ्गिट उत्पन्न गर्यो, जसमा करमा RM 757 मिलियन समावेश छ।
“उदाहरणका लागि, नेपाली कामदार भित्र्याउँदा शुल्क र करको हिसाबले आम्दानी हुन्छ। यो निश्चित रूपमा एक भन्दा बढी स्रोत देशहरूसँग बढ्नेछ, “उनले थपे।
रामलीले भने कि PIKM मा 903 सुरक्षा कम्पनीहरू सदस्यहरू छन्, जसमा 170,000 भन्दा बढी सुरक्षा गार्डहरू कार्यरत छन्।
“हामीलाई विदेशी सुरक्षा गार्डहरू चाहिन्छ किनभने यस्तो काम केही स्थानीयहरूलाई मन पर्दैन। “केही स्थानीयहरू सुरक्षा गार्ड हुन कम झुकाव छन् किनभने यो खतरनाक, फोहोर र गाह्रो कामको ‘थ्रीडी’ श्रेणी अन्तर्गत छ।
“यसबाहेक, केही ग्राहकहरू जस्तै मल र सुपरमार्केटहरू नेपाली गार्डहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् किनभने तिनीहरू काममा बढी प्रतिबद्ध छन्,” उनले भने।
रमलीले गृह मन्त्रालयले विदेशी सुरक्षा गार्ड भर्नामा अर्को स्रोत देश थप्ने प्रस्ताव गरेकोमा संघ कृतज्ञ रहेको बताए । “हामीले लामो समयदेखि यस्तो समाचारको आशा गरेका थियौं। “हामी आशा गर्छौं कि यो वास्तविकता हुनेछ,” उनले थपे।
गृहमन्त्री दातुक सेरी हमजाह जैनुदिनले घोषणा गरे कि मन्त्रालयले बंगलादेश, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाका मानिसहरूलाई सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव गरेको छ।
गृहमन्त्रालय र सुरक्षा सेवा उद्योगका खेलाडीहरुबीच हिजो भएको बैठकको शुभारम्भ गरेपछि उनले पत्रकारहरुसँग भने, ‘हामीले उद्योग व्यवसायी, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेपछि यसलाई हेर्नेछौँ ।
बिहिवार ​​गृह मन्त्रालय र सुरक्षा सेवा उद्योगका व्यवसायीबीच भएको बैठकपछि कार्यक्रमकाबीच सञ्चारकर्मिसंको कुराकानीको क्रममा गृहमन्त्री दातुक सेरी हमजाह जैनुदिनले यस्तो जानकारी दिदै ‘उद्योगकर्मी, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसँग यस् बिषयमा छलफल गरेपछि त्यसलाई हेर्नेछौँ। यो खबर स्त्थानीय पत्रीका द-स्टार ( The Star ) मा प्रकाशित छ्न।
साथै उनका अनुसार सुरक्षागार्डमा “भारतबाट पनि कामदार लैजाने सक्ने सुझावहरू प्राप्त भएका छ्न। तर हामीले कुनै पनि ठूलो घोषणा गर्नुअघि त्यस् बिषयमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ,” सोही अनुसार आगामी दिनमा निर्णय गरिने उनले बताए । सुरक्षा कामदार लिने बारे कुनै समस्या नहोस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालय र संबंधित निकायसँग थप छलफल गर्नेसमेत उनले बताए ।
मलेसियामा कानुन र नियम अनुसार हालसम्म स्थानीय मलेसियन नागरिक र नेपाल देशका (नेपाली) नागरिकहरुले मात्रै सुरक्षागार्डको रुपमा काम गर्न पाउछन् । नेपालीसहित अन्य देशका नागरिकलाई पनि सुरक्षा गार्डको अनुमति दिईएको खण्डमा नेपाली सुरक्षागार्डहरुको रोजगारीमा असर भने पर्ने देखिन्छ । मलेसियामा नेपाली सुरक्षागार्डको कामको तारिफ हुँदै आएको बताइन्छ्।